Garsoore Mark Clattenburg ayaa ku tilmaamay "munaafaq"
Garsoorihii hore ee Premier League Mark Clattenburg ayaa ku tilmaamay tababaraha Liverpool Jurgen Klopp “munaafaq” madaama uu soo jeediyay in Manchester United la ciqaabo xilli ciyaareedkan.
Kadib guuldaradii Liverpool ee ka soo gaadhay Southampton horaantii bishaan, Klopp ayaa ka carooday inuusan ogolaan labo rigoore, isagoo carabka ku adkeeyay farqiga u dhexeeya rigoorooyinka la bixiyay xilligiisii ​​uu hogaaminayay Liverpool iyo rigoorooyinka la siiyay United labadii sano ee ugu horeysay. tan dambe.
“Waxaan maqlay in Manchester United ay tahay labadii sano ee ugu danbeysay ee rigoorayaal marka loo fiiriyo Liverpool shan sano iyo badh ay ku qaadatay kooxdan,” ayuu yidhi tababaraha Liverpool.
Tan iyo markii uu Solsljaer badalay Jose Mourinho bishii December 2018, United waxaa laga dhaliyay 42 rigoore isla mudadaas halka Liverpool laga dhaliyay 19 gool tartamada oo dhan.
Laakiin Clattenburg, oo garsoore ka ahaa 292 kulan oo Premier League ah ayaa qirtay in garsoorayaashu aysan taageerin Man United wuxuuna ku eedeeyay Klopp inuu ciyaaray “ciyaar maskaxeed” ka hor kulanka Liverpool ay la ciyaareyso hogaamiyeyaasha horyaalka axada.
Clattenburg waxa uu aaminsan yahay in Man United ay hore u lahayd go’aano ay ku taageerayso xilligii Sir Alex Ferguson, laakiin taasi hadda xaalku ma aha.
Clattenburg ayaa ku qoray Daily Mail: “Aynu si cad u sheegno, ma jiro eex dhanka garsoorayaasha iyo saraakiisha isboortiga.”
“Miyuu Klopp ka hadlay garsoorayaasha u roonaaday Manchester United? Mise wuxuu soo jeediyay in ciyaartoyda United lagu dhiirrigeliyo inay quustaan? Haddii ujeedkiisu ahaa kii hore, markaa anigu ma haysto waqti. Taasi run maahan.
“Laakiin hadii uu ka hadlay sida fudud ee ciyaartoyda United, waxaan qabaa inuu ka hadlay waxa saxda ah. Xitaa hadii uu iska indhatiro qaar ka mid ah ciyaartoydiisa oo uu sameeyo.
“Waa nin munaafaq ah haddii uu soo jeediyo in ciyaartoyda United ay doonayaan inay ku guuleystaan ​​rigoore. Xiddigaha sida Mo Salah iyo Mane sidoo kale waxay adeegsadaan isla taatikada.
“Wuu walwalsan yahay maxaa yeelay tan iyo waqtigii Sir Alex Ferguson waxaan aheyn tababarihii ugu dambeeyay ee si furan isku daya inuu hogaamiyo garsoore ka hor kulan weyn. Klopp ma uusan sameynin xilli ciyaareedkii hore markii Liverpool ay guuleysatay toddobaad kasta.
“Ma jecli guuldarada, waligeed sidaas ayey ahayd. Laakiin wuu qaldan yahay markii uu soo jeediyay in la taageero Manchester United.
Waxa ay aheyd waqtigii laga caawin lahaa Fergie laakiin maxaa yeelay tan ayaa laga tagay. ”
This straight forward morning exercise melts fats all day lengthy